बजार | Corporate Nepal
सुन प्रतितोला ३ सय रुपियाँ बढ्यो, यस्तो छ आजको बजार भाउ
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ३०० ले बढेर रु ९१ हजार ७०० कायम भएको छ । छापावाल सुन बुधबार प्रतितोला रु ९१ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले अ…
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको लाभांश परिमार्जन, अब कति ?
काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले घोषणा गरेको लाभांशमा परिमार्जन गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज १७ गतेको बैठकले ११.२४ प्रतिशत बोनस शेयर र ४.७६ प्रतिशत नगदसमेत गरी १६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव ग…
ईङवा हाइड्रोले १९ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धक नियुक्त
काठमाडौँ । ईङवा हाइड्रोपावर लिमिटेडले १९ लाख ६० हजार कित्ता साधारण शेयर(आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति शेयर अंकित मूल्य रु. १००/– (एक सय रुपियाँ मात्र) दरको आईपीओ निष्काशनका लागि…
सामलिङ पावरको आईपीओ आजदेखि, कहिलेसम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौँ । सामलिङ्ग पावर कम्पनीको साधारण शेयर (आईपीओ) आजदेखि निष्काशन खुला भएको छ । उक्त कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारणले गतेदेखि ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ…
काठमाडौं । यो वर्षको दशैंमा नेपाली मुद्रासँगको तुलनामा डलर सर्वाधिक महंगो हुन पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैैंकको तथ्यांक अनुसार यो वर्षको दशैंको मध्य अर्थात असोज २७ गते अष्टमीको दिन डलर सबैभन्दा महंगो भएको छ । अष्…
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचनका कारण भारी गिरावट हुँदै आएको शेयर बजारमा बुधबार भने सुधार आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने भएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा …
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था (एसडीएलबीइएसएल) को मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा प्रकाशित सूचना अनुसार एक हजार ४ सय १५ रूपियाँमा मूल्य समायोजन भएको हो । २५ प्रतिशत बोनश शेयर प…
सामलिङ्ग पावरको आईपीओ भोलिदेखि, ६७ हजार ८ सय ९० जनाले १० कित्ता पाउने
काठमाडौँ । सामलिङ्ग पावर कम्पनीले कात्तिक ४ गतेदेखि साधारण शेयर(आईपीओ) निष्काशन खुला गर्ने भएको छ । उक्त कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारणले गतेदेखि कार्तिक ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । बिक्री प्रबन्धक नेपाल…
शेयर बजार उच्च अंकले घट्दा अत्तालिए लगानीकर्ता, कारोबार रकममा भने सुधार
काठमाडौँ । शेयर बजार उच्च अंकले घट्न थालेपछि लगानीकर्ताहरु अत्तालिन थालेका छन् । शेयर पछि खुलेको शेयर बजार पहिलो दिन आइतबार १७.५९ अंकले बढेको भए पनि हिजो सोमबार पुनः ६९.५१ अंकले घटेको थियो । आज पनि बजारमा…